प्रदर्शनीमा ४९६ कलाकृति- कला - कान्तिपुर समाचार
डुंगामा सजाइएका विभिन्न रङका गुलाफका फूलहरुमाथि कालो र सेतो दुइटा औंठाछापमा लेखिएको थियो, ‘ह्युम्यानिटी, वी आर अल कनेक्टेड ।’
वैशाख ६, २०७८ सुशीला तामा‌ङ
काठमाडौँ — कलाले निश्चित भाषा बोल्दैन । यसको खास भूगोल छैन । यसले अनेक रङ, रूप, भाषा, धर्म, संस्कृति र देशबारे एउटै लय बोल्छ । त्यही लयलाई पछ्याउँदै हिँड्छन् कलाकार । कलाको फरक भाषा र भूगोल हुँदो हो त म्यान्मारमा प्रजातन्त्र पुनः बहालीका लागि अनाहकमा ज्यान गुमाएका सयौं मानिसप्रति नेपालका कलाकार रवीन्द्र श्रेष्ठको मनमा सहानुभूति पलाउने थिएन ।
म्यान्मारमा गरिएको सैनिक ‘कु’ पछि ज्यान गुमाएकाहरूको स्मृतिमा रवीन्द्रले आइतबार माइतीघरमा कलामार्फत नै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे । डुंगामा देखाइएको प्रतिस्थापन कलामार्फत उनले मानवता र विश्वलाई जोड्ने प्रयास गरेका हुन् । डुंगामा सजाइएका विभिन्न रङका गुलाफका फूलहरूमाथि कालो र सेतो दुइटा औंठाछापमा लेखिएको थियो, ‘ह्युम्यानिटी, वी आर अल कनेक्टेड ।’ डुंगाको अग्रभागमा मृतकहरूप्रति सहभागी दर्शकले पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आफ्नो भावना अक्षरमा पोखे ।
मानिस जुन भूगोल र परिवेशको भए पनि मानवता जोडिने रवीन्द्र बताउँछन् । ‘म्यान्मारको मानव नरसंहारले मेरो मन छोयो,’ उनले भने, ‘कलामार्फत केही गर्नैपर्छ भनेर म कति रात विचलित भएँ ! त्यही मेरो छटपटीमा यो कला सिर्जना भयो ।’ दिमागमा प्रतिस्थापन कलाका लागि अवधारणा आएपछि उनी डुंगाको खोजीमा लागे । यसमा उनलाई साथ दिए करिमा जोशी र दीपेश लिम्बूले ।
अन्ततः उनले नागदहमा पानीमा आधा डुबिरहेको बेवारिस डुंगालाई बबरमहलस्थित आर्ट काउन्सिलमा ल्याए र एक साताभन्दा बढी लगाएर रङरोगन र साजसज्जा गरे । उनको कामलाई अझै प्रभावकारी र ऐतिहासिक दस्ताबेजका रूपमा राख्न रवीन्द्रसँगै करिमा र दीपेश पनि अहोरात्र खटे । करिमाले रवीन्द्रको हरेक कामलाई तस्बिरमा कैद गरेर राखेकी छन् भने दीपेशले डकुमेन्ट्री फिल्म नै बनाउने योजना बनाएका छन् । उक्त डुंगालाई १७ वर्षअघि कृष्ण मालीले पोखराबाट ल्याएका थिए । डुंगालाई उद्धार र कनेक्सनको प्रतीकका रूपमा लिन्छन् रवीन्द्र । उनी भने, ‘डुंगाले मानिसलाई यात्रामा उद्धार त गर्छ नै, पानी र जमिनलाई पनि जोड्छ । यो मानव सभ्यता र संस्कृतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । डुंगाले जसरी मानवलाई उद्धार गर्छ, त्यसरी नै म्यान्मारको संकटलाई हामी सबैको प्रार्थना र प्रयासले टार्न सकोस् ।’
डुंगालाई प्रतीकात्मक रूपमा देखाएर ‘पब्लिक आर्ट’ मार्फत सबैको मनलाई जोड्ने काम गरेको उनले बताए । ‘मेरो कलालाई सबै दर्शकले अवलोकन मात्र गरेनन्, म्यान्मारको घटनाप्रति सहानुभूति पनि देखाए,’ उनले भने, ‘कलाले समसामयिक कुरा उठाएर पब्लिकलाई देखाउन सक्नुपर्छ । पब्लिकसँगको सम्पर्कमा आएर उनीहरूको धारणा तथा भावना आफ्नो कलामा मिसाउन पाउँदा बेग्लै आनन्द प्राप्त हुन्छ ।’
खासमा रवीन्द्र दृष्टान्त र अवधारणागत कलाकृति सिर्जनामा रुचि राख्छन् । उनी बन्द कोठा र ग्यालरीमा मात्र होइनन्, दुनियाँको गतिविधिलाई पनि नियालिरहेका हुन्छन् । चाहे राजनीतिक होस् वा सामाजिक जुनसुकै विषयमा उनी कला सिर्जना गरेर सार्वजनिक हुन्छन् । मुलुकको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन स्थापना गर्ने डा. गोविन्द केसी, अमेरिका र नेपालमा रङ र जातका आधारमा गरिएका विभेद, कोरोना महामारीलगायत विषयलाई पनि कलामा उतारेर नागरिकलाई देखाए । जीवनसँग जोड्ने लाइन वर्क, औंठाछाप, ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स, दलित लाइभ म्याटर्स, नयाँ युगको बिक्रीजस्ता काममा उनले कलामार्फत खबरदारी गरेका छन् ।
बृहत् नागरिक आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ युग घोषणा गरेको तस्बिर छापिएको पत्रिकालाई हस्ताक्षर गरेर प्रज्ञाप्रतिष्ठानको डबलीमा बिक्रीसमेत गरेका थिए । उनले गत माघ २३ गते ओलीको आमसभामा ‘नयाँ युगको बिक्री’ सहितको पत्रिका प्रहरीको भीडमा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रत्येक क्षेत्रबाट जनताले सरकारको कामकाजको खबरदारी गर्नुपर्ने औंल्याउँदै उनी कला क्षेत्र पनि सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘कलाले समाजको कुरा बोलेपछि त्यसलाई पब्लिकमा ल्याउन सक्नुपर्छ र आम मानिसका लागि आवाजको काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कला र कलाकार समयक्रमसँगै अपडेट र परिवर्तन हुनु आजको आवश्यकता हो ।’
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०९:४०